N'ebe ahia ahia taa, enwere uzo mgbasa ozi karia ka o dikwa. N’ebe dị mma, nke ahụ pụtara ohere iji zie ozi gị. N’akụkụ dị ala, enwere asọmpi karịa oge ọ bụla iji dọta uche ndị na-ege ntị. Mmụbawanye nke mgbasa ozi pụtara mgbasa ozi karịa, na mgbasa ozi ndị ahụ na-abanyekwu. Ọ bụghị naanị mbipụta mgbasa ozi, mgbasa ozi TV ma ọ bụ nke redio. Ọ bụ na-na peeji nke online mmapụta mgbasa ozi na-eme ka ị na-ahụ ihe efu “X” wepụ